Ajụjụ - Jinan JCUT CNC akụrụngwa Co., Ltd.
Igwe igwe roba ATC osisi cnc
Igwe cnc rawụta igwe
Nke a bụ oge mbụ m zụrụ igwe ahụ, ọ dị mfe iji rụọ ọrụ?
Anyị nwere ike ịnye akwụkwọ ntuziaka ọrụ ma ọ bụ vidiyo maka iduzi. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịmụ, anyị nwekwara ike inyere gị aka site na "Onye na-ekiri otu" n'ịntanetị, site na iji ekwentị ma ọ bụ Skype kọwaa.
Etu esi ahọrọ igwe dabara adaba?
Can nwere ike ịgwa anyị ihe eji arụ ọrụ, nha, yana ọrụ igwe. Anyị nwere ike ịkwado igwe kachasị adabara dịka ahụmịhe anyị si dị.
Kedu ka m ga - atụkwasị obi maka ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa gị?
Usoro mmepụta ihe niile ga-adị n'okpuru nyocha mgbe niile na njikwa ike. A ga-anwale igwe a zuru oke iji jide n'aka na ha nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma tupu ha apụọ n'ụlọ ọrụ. Vidiyo na-anwale na eserese ahụ ga-adị tupu nnyefe.
Ọ bụrụ na igwe nwere nsogbu ọbụla ka m nyechara ya iwu, kedu ihe m ga - eme?
Akụkụ n'efu na-ezitere gị na oge akwụkwọ ikike igwe ma ọ bụrụ na igwe nwere nsogbu ọ bụla. Ndụ ịre ahịa azụmaahịa maka igwe ọfụma, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na igwe gị nwere nsogbu ọ bụla. Anyị ga-enye gị ọrụ 24hours site na ekwentị na skype.
Enwere m ike ịga leta ụlọ ọrụ gị?
Ih! Anyị na-anabata ndị ahịa ịbịa na nke anyị.
Kedu ụbọchị nnyefe gị?
Maka igwe eji arụ ọrụ, ihe dị ka ụbọchị iri na ise; Maka igwe eji eme ihe, ihe ruru ubochi iri abuo.
Anyị MOQ bụ igwe setịpụrụ 1. Anyị nwere ike izipu igwe n'ọdụ ụgbọ mmiri obodo gị ozugbo, biko gwa anyị aha ọdụ ụgbọ mmiri gị. A ga-ebugara gị ibu na-ebu ibu na ọnụahịa igwe.
IGBO EGO +8618006360664
IGBO EGO +8615863173380